अस्थिरता र गुटवन्धिको राजनितीलाई चिरेर शैक्षिक क्षेत्रको बिकासमा सदै लडीरहनेछु : नेविसंघ केन्द्रिय सदस्य आरसी | हुलाकी अनलाइन
नवलपरासी कावासोती स्थाई घर भएका राचन्द्र भट्टराई (आरसी) नेविसंघको भर्खर सम्पन्न अधिवेशन बाट केन्द्रिय सदस्यमा अतयाधिक मतले विजयी हुनुभएको छ । प्रदेश नम्बर ४ बाट निर्वाचित भट्टराई २०५७ साल देखी नेविसंघमा आवद्ध हुनुहुन्छ । २०५७ सालमा कावासोतीको लुम्बिनी आदर्श क्याम्पसको ईकाइ समितीको सचिव , २०६३ सालमा जिल्ला सदस्य , २०६६ सालमा त्रिचन्द्र क्याम्पस काठमाण्डौको ईकाइ उपाध्यक्ष हुदै २०६९ सालमा नेविसंघ नवलपरासी काठमाण्डौ सम्पर्क समितीको अध्यक्ष भैसक्नुभएको छ । केन्द्रिय सदस्यमा निर्वाचित भैसकेपछी अवको नेविसंघ कसरी अगाडी वढ्छ भन्ने समवन्धका हुलाकी टीमले गरेको कुराकानी
सर्वप्रथम बधाई छ तपाईलाई हुलाकी अनलाईन टिमको तर्फ बाट?
उत्तर – हुलाकी अनलाईन टिमलाई हार्दीक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
नेविसंघको नयां नेतृत्व सामु के के चुनौती देख्नुभएको छ?
उत्तर – राजनितीक अस्थिरता र गुटवन्धिको राजनितीलाई चिरेर अगाडी वढ्नुपर्ने आवश्यक्ता छ । नेविसंघका साथीहरु लाई प्रशिक्षित गराउन अपरीहार्य देखीन्छ । साथै विद्यमान शैक्षिक प्रणाली लाई समयानुकुल परीमार्जित गर्दै वैज्ञानिक शैक्षिक प्रणाली, व्यापारीक शिक्षा लाई रोक्दै सर्वशुलभ शिक्षा प्राप्तिका लागि लड्नुनै अहीलेको चुनौती हो भन्ने मलाई लाग्दछ । साथै राजनितिक चुनौती लाई सामना गर्नुपनी अर्को चुनौती हो ।
तपाई नेविसंघको केन्द्रिय सदस्यमा निर्वाचित भैसकेपछी तपाईले प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशका आम विद्यार्थीले के आशा गर्ने , तपाई संग के छ त्यस्तो योजना?
उत्तर – प्रथमत् मलाई अत्याधिक मतले विजयी गराउनुहुने सवै विद्यार्थी साथीहरु लाई धन्यवाद । विशेषगरी प्रदेश नम्बर ४ का नेविसंघका अग्रज साथीहरु , समकक्षी साथै प्रतिनिधी साथीहरु लाई हृदयदेखी नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु । जहांसम्म तपाईको प्रश्न छ के गर्नुहुन्छ भन्नेमा ४ नम्बर प्रदेश शैक्षिकरुपमा समेत पछाडी परेको प्रदेश हो । त्यसैले पनी सर्वसुलभ शिक्षा तथा शैक्षिक माफियाहरु बाट शिक्षा क्षेत्रलाई छुटकारा दिदै गुणात्मक शैक्षिक विकासका लागि म सधैव तयार रहने छु । साथै त्यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष कुनाकन्दरामा पुगेर वास्तविक समस्याको बारेमा स्थानीय विद्यार्थी संगठन संग सहकार्य गर्दै केन्द्रमा आवाज उठाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु ।
विद्यार्थी संगठनहरु शैक्षिक मुद्धामा भन्दा पनी माउं पार्टीको आन्दोलनमा र नेताको पछाडी मात्र लाएको देखीन्छ नी?
उत्तर – स्वभाविकरुपमा तपाईले भनेको कुरामा केही सत्यता होला । तर विद्यार्थी संगठन माउं पार्टीको पुच्छर भएर होईनकी सहयोगी भएर लाग्नुपर्ने देखीन्छ । नेविसंघले माउं पार्टीका सकारात्मक कदम लाई साथ दिदै नकारात्मक कामको विरोध पनी गर्दछ । साथै शैक्षिक मुद्धामा सधै आम विद्यार्थीको पक्षमा वकालत गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौ ।
नेपालको शैक्षिक क्षेत्रको गुणात्मक विकासका लागि नेविसंघ संग के कस्ता योजना छन्?
उत्तर – सामुदायिक विद्यालय र निजी विद्यालय विच देखीएको खाडल पुर्नुपर्ने आवश्यक्ता छ । शैक्षिक क्षेत्रमा देखीएको राजनितीक हस्तक्षेप तथा विश्वविद्यालयमा देखीएको वेथिती लाई सच्च्याउदै प्रशिक्षीत नेविसंघका माध्ययम वाट मुलुकको शैक्षिक विकासमा योजनावद्ध विकासका लागि हामी जुटीरहेको जानकारी गराउदछौ ।
नेकपा (एमाले ) ले ७ प्रदेशका संयोजक क-कसलाई तोक्यो, नाम सहित
उखु मिलका कर्मचारीलाई प्रशासनको गेटमै कुटे किसानले
संघले देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गर्ने, नेकपासम्वद्ध चिकित्सकहरुले अवज्ञा गर्ने
नवलपरासीको नवलपुर अव नयाँ जिल्ला , सदरमुकाम कावासोती
डीएसपीको गुनासोः बुटवल लागु औषध र वेश्यावृत्तिको हब भयो